Nagarik News - 'संगीतसँग खेलबाड भइरहेको छ'
होमपेज / शुक्रबार / 'संगीतसँग खेलबाड भइरहेको छ'
'संगीतसँग खेलबाड भइरहेको छ'	27 Apr 2013 १४ बैशाख, २०७०
संगीतकार शुम्भुजित बास्कोटा
कुनै बेला शम्भुजीत बाँस्कोटा कति ठूला स्टार थिए भने उनको संगीतबिना नेपाली फिल्म बनाउने कल्पनासम्म गरिँदैनथ्यो। तीन सयभन्दा बढी फिल्म र १८ सयभन्दा बढी गीतमा संगीत दिएका छन् उनले। आजका संगीतकर्मीसँग साधना र समर्पण कम भएको देख्छन् उनी। संगीतको सेरोफेरोमा उनीसँग स्वरूप आचार्यले गरेको कुराकानी: • हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ?म आफ्नै विषय संगीतमा व्यस्त छु। उन्नति शिलाजीको 'धर्तीको सन्देश' नामक नयाँ एल्बम गरेँ, चलचित्र र इभेन्ट्सको काम गर्दै छु। केही ब्याले (गीतिनाटक) मा पनि काम गरिरहेको छु, यादव खरेलको 'लाहुर' र कालिप्रसाद रिजालको 'यशोधरा'। • संगीत क्षेत्रमा लाग्नुभएको चार दशकजति भइसक्यो। आफूले सुरु गर्दाको समय र अहिले के–कस्तो फरक पाउनुहुन्छ?अर्गानिक फलफूल र हाइब्रिडमा जे फरक छ, अहिले र पहिलेको संगीतमा त्यही फरक छ। त्यो बेलाको समय प्रविधिको पक्षमा पछि भए पनि सिर्जनाको क्षेत्रमा भने अहिलेको पुस्ताभन्दा निकै अगाडि थियो। संगीतलाई साधनाको रूपमा लिइन्थ्यो र संगीतकर्मी अनुशासित थिए। त्यसैले त्यो बेलाको संगीत कालजयी छ। त्यो कालजयी संगीत त्यसै सिर्जना हँुदैन। त्यसका लागि साधना, समर्पण र मेहनत सबै चाहिन्छ। अत्यन्तै कठिन परिस्थिति थियो। केवल रेडियो नेपाल थियो। तैपनि त्यो बेलाको संगीत अत्यन्तै कर्णप्रिय छ। तर, अहिले सुनाउनभन्दा देखाउनका लागि गीत गाइन्छ। जसले पनि गाउन सक्ने भएको छ। वाद्यवादन पनि इम्प्रोभाइज्ड भएको छ। एउटै मेसिनबाट सबै धुन निकालिन्छ। न ढोलक चाहिन्छ, न बाँसुरी।• रेडियो नेपालमा गीत रेकर्ड गर्न कति कठिन हुन्थ्यो? अत्यन्तै कठिन। पहिला त हामी गीतकार, संगीतकार वा गायक भनेर चिनाउनुपर्‍यो। त्यसपछि त्यहाँको अनुशासनमा बस्नुपर्थ्यो। गीतकारहरूले लेखेर बुझाएको गीत सेन्सर भएर बोर्डमा टाँसिएपछि, एउटा गीत छानेर त्यसमा संगीत भर्नुपर्थ्यो। संगीत भरेर मात्र भएन। गीतकारलाई चित्त बुझ्नुपर्‍यो। त्यसपछि त्यही अुनसारको गाउने मान्छे खोज्नुपर्‍यो। वाद्यवादन मिलाउनुपर्थ्यो। लाइभ हुन्थ्यो धेरै काम। गाह्रो थियो। तर, अहिलेको भन्दा निकै रमाइलो माहौल थियो। • भनेपछि सन् ७० देखि ९० को दशकसम्मको समय नेपाली संगीतको 'गोल्डेन इरा' थियो।अवश्य नै। त्यो नेपाली संगीतको मात्र होइन वेस्टर्न, अमेरिकन र भारतीय संगीतको पनि गोल्डेन इरा थियो। त्यो बेला संसारभरि नै महान् संगीत सर्जकहरूको बोलवाला थियो।• संगीतमा प्राविधिक विकाससँगै सिर्जनामा चाहिँ किन यति धेरै ह्रास आएको त?क्राउड बढी भएर। त्यस बखत कम्युनिकेसन कम हुन्थ्यो। बाहिरका गीत सुन्नै गाह्रो हुन्थ्यो। बाहिर बसेर आएकाले लिएर आएको संगीत वा एलपी र क्यासेट सुन्ने हो। अब अहिले त युट्युब खोल्यो भने जे पनि सुन्न पाइन्छ। के नयाँ, के पुरानो? विकास चाहिन्छ। त्यो हुनु नराम्रो होइन। तर, आइटी सेक्टरमा मात्र त्यो विकास भयो। सिर्जनामा भएन। मैले अघि नै भनेँ, तबला–ढोलकको धुन तपाईं सिडीमा पाउनुहुन्छ। ढोलक वा तबला लाइभ बजाइरहनुपरेन। तर, लाइभमा जुन मिठास हुन्छ, त्यो रेकर्डेड धुनमा हुँदैन। अर्को कुरा संगीत भर्न र गाउन त मेसिनले सक्दैन। मान्छेले नै गर्नुपर्छ। त्यसका लागि त सिर्जना गर्ने चेतना चाहियो, साधना चाहियो। त्यसको अहिले केही अभाव छ। पहिला रेडियो नेपालमात्र हुँदा क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्थ्यो। मनलागी गर्न पाइँदैनथ्यो। अहिले एउटा कोठामा बसेर मनलागी गर्न पाइन्छ। संगीतसँग खेलबाड भइरहेको छ। • यस्तो बेथिति हुँदा पनि तपाईंहरूजस्ता अग्रज किन चुप लागेर बसेको छ? म चुप लागेर बसेको छैन। आफ्नो काम गरिरहेको छु। मैले त नेपालको संगीत क्षेत्रको जगेर्ना र विकास गर्न संगीत बोर्डको आवश्यकता छ, त्यो बन्नुपर्छ भन्दै प्रपोजल बोकेर केही प्रधानमन्त्री र नेताको दैलोमा पुगेको छु। तर, कसैले कुरै सुन्दैनन्।• संगीतलाई समाज चित्रण गर्ने सहज र राम्रो माध्यम मानिन्छ। अहिलेको नेपाली संगीत समाज चित्रण गर्न सफल छ कि छैन?पहिलाको नेपाली संगीतले अवश्य नै समाजको चित्रण गर्थ्यो। त्यसमा दुई मत छैन। धेरै पर पनि जानुपर्दैन, गाइनेले सारंगीसित गाएको गीत सुने पुग्छ। अहिलेका कुरा गर्दा संगीतबाट समाज र राष्ट्रबोधको चेतना हराएको छ। आँैलामै गन्न सकिने गीतकार, संगीतकार र गायकहरूले समाजमा भइरहेका अहिलेको बेथितिलाई आफ्ना सिर्जनाबाट सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छन्। गर्दै नगरेका होइनन्। तर, अहिलेको नेपाली समाजको अवश्यकताभन्दा त्यो धेरै न्यून छ। संगीतले मान्छेलाई एक गराउन सक्छ। अहिले फुट्दै गएको समाजमा त्यो अत्यन्तै आवश्यक छ। हामी त्यसमा पछाडि परेका छौँ।• एकताका तपाईंको नेपाली फिल्म क्षेत्रमा एकछत्र राज थियो। शम्भुजीत बाँस्कोटाको संगीत नभएको फिल्मको परिकल्पना पनि गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। एकाएक त्यो टुटेको छ।त्यो टुटेको भन्दा पनि म आफैँले टुटाएको हो। जुन बखत संगीतलाई पूजा गरिन्थ्यो, फिल्ममा मैले काम गरेँ। त्यो बेला फिल्ममा गीतको ठूलो योगदान हुन्थ्यो। नायकलाई गीतले स्टार बनाउँथ्यो। 'रातो टीका निधारमा' वा 'बाँझो खेतमा' भन्नेबित्तिकै मान्छेले राजेश हमाललाई सम्भि्कन्छन्। 'माया नै माया छ तिम्रो गाउँमा' र 'तिम्रो त्यो आँखामा को बस्छ' गीत भनेपछि दिलिप रायमाझीलाई सम्भि्कन्छन्। भुवन केसी कुनै प्रोग्राममा नाच्न गए भने 'म हुँ नेपालीबाबु' बजिहाल्छ। अरू त अरू, राजेन्द्र खड्गीलाई पनि मान्छेहरूले 'हाम्लाई पनि मायाले हेर पार्वती' बाट चिन्छन् र सन्तोष पन्तलाई 'गोलमाल भो अन्तरे' बाट। त्यो बेलाको फिल्ममा संगीतको क्रेज नै अर्को थियो। हामी संगीतकार पनि त्यतिबेला स्टार हुन्थ्यौँ। अहिले फिल्ममा धेरै गीत चाहिँदैन। एकदुइटा भए पुग्छ। त्यो पनि आइटम नम्बर भए पुग्छ। फिल्मको कथावस्तुबाट बुनेर ल्याएको गीत नै चाहिँदैन। हामीले त्यतिबेला पनि आइटम नम्बर नगरेका होइनौँ। हामीले गरेको आइटम गीतको चर्चा संसद्मा पनि हुन्थ्यो। सन्त नेता किशुनजीले 'ए संगीता' वा 'किसुनजी किसुनजी' भन्ने गीतको चर्चा हाउसमा गर्नुहुन्थ्यो। मैल भन्न खोजेको के भने त्यो बेला पनि आइटम हुन्थ्यो। अहिले पनि हुन्छ। राम्रो छ। तर, क्रियटिभ मान्छेलाई अहिले निर्माताको दबाब हुन्छ। चारवटा क्यासेट दिएर यस्तो गीत चाहियो भन्छन्। त्यो त सम्भव हुँदैन। मैले तीन सयभन्दा बढी फिल्म गरेँ, १८ सयभन्दा बढी गीतमा संगीत भरेँ, विज्ञापनको जिंगल बनाएँ सात सयजति। कति गीत अहिले पनि सुन्दा आफ्नो प्रभाव पाउँछु। बलिउडमा पनि त्यो प्रभाव सुन्छु। किनभने बम्बेमा गएर मैले थुप्रै गीतको एरेन्जमेन्ट गरेको छु। मेलोडीको प्रभाव त सबैलाई पर्छ नि। मैले कपी भनेको हैन है। प्रभाव भनेको। मैले गरेका फिल्मका सिडीहरू ३५/४० हजार बिक्थ्यो। अर्को कुरा, मैले त्यो बेला एउटा गीत गर्न लिने पैसाले त अहिले पूरा फिल्मको गीत बन्छन्। र, पहिला जस्तो प्रमोट पनि गर्दैनन्।• त्यो बेला त्यत्रो एल्बम बिक्री हुँदो रहेछ। अहिले संगीतको बजार कस्तो छ त?हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि, ठप्प छ। अहिले पनि राम्रो– राम्रो संगीत सिर्जना गर्नेहरू नभएका होइनन्, छन्। तर, भर केवल सिआरबिटी र कन्सर्टको मात्र हो। त्यो चल्यो भने चल्यो, नत्र चेट। अहिले कलाकारको शोषण भइरहेको छ। नेताहरू सांसद् भएको भरमा राज्यको गाडी चढेर हिँड्छ। देश–विदेश गएर नेपाललाई चिनाउने कलाकार भने लुखुर–लुखुर बाटोमा हिँड्नुपर्छ। के राज्यले उनीहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन?• यो गुनासो छोडेर अरू कुरा गरौँ। तपाईंलाई कस्तो वातावरणले संगीत सिजना गर्न मद्दत गर्छ?म आफैँसँग मोहित हुन्छु। एकछिन एक्लै डुब्छु। मलाई समय, काल, परिस्थिति चाहिँदै, चाहिँदैन। मलाई केही चिज चाहियो भने एकछिन सबै बिर्सेर त्यसमा घोरिएर आफैँभित्र हराउँछु। रुनुपर्ने ठाउँमा रोएरै सोच्छु, हाँस्नुपर्ने ठाउँमा हाँसेर सोच्छु। म आफैँभित्र संगीत खोज्छु।• संगीत सिर्जना गरेर शब्द भर्नुहुन्छ कि शब्द हेरेर संगीत भर्नुहुन्छ?दुुवै गर्छु। सजिलो त आफ्नो मनमा आएको संगीतमा अरूले शब्द भरिदिएकै सजिलो हुन्छ। मैले केही संगीतमा पनि गति लेखाएको छु। जस्तोः 'बादल बनाइदेऊ, आकार बदल्न सकूँ', 'बदाम सोलीमा'। • बिना शब्द धुन सिर्जना गर्न सजिलो कि शब्दसहितको धुन सिर्जना गर्न सजिलो?धुन त आफूले कुन मुडमा मस्त भएर गरिन्छ। त्यसमा गीतकारले गीत लेखिदियो भने धेरै सजिलो हुन्छ। त्यो भारतमा धेरै चलेको छ। तर, नेपालमा के भयो भने हामी सुगम संगीतको पछि लाग्यौँ। रेडियो नेपालमा गीतकारले गीत बुझाएर सेन्सर भएर निक्लेपछि मात्र हामीले संगीत भर्ने गर्थ्यौँ। त्यो कल्चरबाट आएकाले हामी शब्दमा संगीत भर्न प्राथमिकता दिन्छौँ।• कलाकारहरू रसिक मिजासका हुन्छन् भनिन्छ। तपाईं कत्तिको रसिक हुनुहुन्छ?मान्छे भएपछि रसिक त भइहालिन्छ नि। मलाई हाँस्न असाध्यै मन पर्छ। जिन्दगीमा सफल हुन संघर्ष गर्नुपर्छ। मानिस भनेको अत्यन्तै शक्तिशाली चिज हो। मानिसले धेरै कुरा बनाएको छ। भगवान्ले सृष्टि गरेको यो संसार चलाउने त मान्छे नै हो। त्यो सोचेरै पनि म रोमान्टिक हुन्छु। Tweet Leaveacomment Message *
खतरनाक पिरतीकास्की, पुम्दीभुम्दीकी चाँदनी बराल र कलिम शेख प्रेममा थिए। डेढ वर्षसम्म चलेको उनीहरूको प्रेम शारीरिक सम्बन्धसम्म पुग्यो। बिस्तारै कलिमलाई चाँदनीप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो। उनीसँगको सम्बन्धबारे अरूले थाहा पाउलान् भन्ने पिर...	'यौनप्यासी' सुमिनाफिल्म 'दुलही'मा घुम्टो ओढेर फिल्म क्षेत्रमा भित्रिएकी सुमिना घिमिरेको पहिरन उतार्ने क्रम जारी छ। यसअघि फिल्म 'नाइन ओ क्लक'मा बोल्ड रूपमा प्रस्तुत भएकी उनी फिल्म 'लभ फरेभर' मा झन् बोल्ड...	‘बैंसमा बोलीले लट्ठ्याइन्थ्यो धेरैलाई’– रविन शर्मा, गायक
किशोरावस्थाको सुरुवातमा म स्कुल लेभलको पढाइ सकेर भारतको खर्साङबाट काठमाडौँ आएँ। म निकै प्रतिभाशाली विद्यार्थी थिएँ। जहिले पनि क्लासमा प्रथम हुने। त्यसैले पनि म स्वाभाविक रूपमा अनुशासित...	निर्लज्जताको हदसंस्कृतमा एउटा उखान छ– 'एकाम् लज्जाम् परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्।' अर्था्त, लाज एउटा त्यागेपछि जे गरे पनि भयो। यहाँ यही लाज पचाउनेका कुरा हुँदै छ। यी लज्जा पचाउने हुन्, संगीतकार...	धुर्मुस जोडी भन्छन्- 'सरसफाइ अभियान नेताको दिमागसम्म चलाउनुपर्छ'सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेलाई भन्दा धुर्मुस र सुन्तलीलाई चिन्ने मानिस बढी छन्। यो जोडी टेलिशृंखला 'मेरी बास्सै'लाई मूल घर र आफ्नो घरलाई दोस्रो घर ठान्छ। यो टेलिशृंखलाले उनीहरूलाई चर्चित...	किन टिक्दैनन् हिरोइन ?नेपाली फिल्ममा हिरोइन बन्ने प्रक्रिया के हो ? आजसम्म कसैलाई थाहा छैन । सेतो पर्दामा अनुहार देखाउने रहर र महत्वकांक्षाले थुप्रै युवती हरेक वर्ष फिल्म क्षेत्रमा हाम्फाल्छन् । र, डुब्छन्...	जोगी ड्राइभरदेशभरिबाट काठमाडौँ भित्रिएका यात्रुबाहक बसको घुइँचो हुन्छ, हरेक बिहान नयाँ बसपार्कमा। एक बिहान एउटा पहेँलो बसलाई पार्किङ गराउँदै गर्दा केही मान्छेले घेरेर पार्किङ गराउनै मुश्किल पारिरहेका थिए। उनीहरू ड्राइभरतिर आँखा...	जय हो भ्यालेन्टाइन बाबा!हावा, पानी र अन्नजस्तै अनिवार्य छ प्रेम। यो मानव जीवनको सबैभन्दा सुखद आयाम हो। प्रेमको अमरत्व र शाश्वताबारे असंख्य ग्रन्थ लेखिएका छन्, असंख्य गीत गाइएका छन्। केही वर्षदेखि नेपाली समाजले...	शुक्रबार	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी...	कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...	मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेनरंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...	भर्खरै...